kulmissom | hussein adan bille
Dal qiimihii waa nabad Gogol rag waa nabad!!!
Mohamed Ahmed Halane–BNN– Qormadeena maanta waxaa ku eegeynaa erayadan oo ka turjumaya qiimaha ay nabadu leeyahay. Hadaba marka laga hadlayo qiimaha uu wadan leeyahay ayaa ah mid ku dhisan nabada, maxaa yeelay ruuxii nadab haysta ayaa hor mar sameeya, balse hadii uu san dal lahayn nabad ay ka dhigan tahay ruux xanuunsan oo aan ku fakari Karin wax hor mar ah, sababtoo ah jismi fiyow baa caqli fiyow leh, ama hadii aan si kale u dhigo umad xasiloon baa fakarta oo colaad gaajo iyo abaar aan haysan.
Gogol rag waa nabad!!!
Bari hore ayaa waxaa jiri jiray laba gabdhood oo walaalo ahaa. Gabdhaha midkood way qurux badneyd laakiinse garaad fiican ma lahayn. Gabadha kalese aad uma qurux badneyn waxaase alle siiyey garaad fiican.
Markii gabdhihii koreen ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yimid wiil guur doon ah waxaase wiilkii ku adkaatay sidii uu u kala dooran lahaa labada gabdhood wiilkii wuxuu u tagey oday garaad fiican leh, wuxuuna ku yiri: “waxaad igala talisaa labada gabdhood tii aan guursan lahaa”. Waxaa uu u sheegay astaamihii labada gabdhood.
Odaygii garaadka fiican lahaa wuxuu ku yiri wiilkii, “war dumarka qurux kaliya laguma raacee caqligooda ayaa la eegaa ee bal gabdhaha inoo gee”. Odaygii iyo wiilkii ayaa isa soo raacay, waxayna u yimaadeen labadii gabdhood. Odaygii wuxuu labadii gabdhood weydiiyey sadexdan su’aalood si uu ugu qiimeeyo heerka gaaraadka gabdhaha mid kasta uu gaarsiisan yahay. Wuxuuna ku yiri.
Gabdhow -rag gogoshii waa maxay?
-geel xeradii waa maxay?
garow (masago) iidaankiisa waa maxay ?
Gabadhii quruxda badneyd waxay ku jawaabtay, “rag gogoshii waa dermo iyo raar (qoryo iyo caws sida sariirta loo sameeyay)”. Geel xeradii waa ood dheer oo uuna ka dhicin habeenkii.
Garow iidaankiina waa subag iyo caano.
Gabadhii garaadka fiicnaydna waxay ku jawaabtay:
“rag gogashii waa nabad”. Nin nabad haysta meel walba wuu ku gam’ayaa”.
“geel xeradiina waa in uu leeyahay rag xanaanadiisa iyo howshiisa ku fiican”
“garaw iidaankiisa waa qof baahi u qaba sii”.
Markaas ka dib ayaa odaygii wiilkii guurdoonka ahaa ku yiri: “waxaad guursataa gabdha an quruxda badneyn, waayo waxay leedahay garaad fiican, saddexdii su’aalood si sax ah ayey uga jawaabtey.
Hadaba akhristow marka aan leenahay “gogol rag waa nabad”
Ma ahan raga oo kaliya maxaa yeelay hadii colaad aloosanto ma jiro qof bini’aadan ah oo hurdo ka bogan kara.
Geel xeradii waa in uu haysto rag ilaaliya hadii kale geelaas xero kuma jiro.
Garaw (masago) iidaankiisana waa qof baahi u qaba sii maxaa yeelay qof baahan waxba uma dha dhamaan waayo hadii uu baahan yahay qofka iidaan kama fikiro.
kala soco wixii barnaamijyo ah webkani
w\_q . hussein adan bille
Feb3February 3, 2013 • By siigaaloow • • Comments: +